Abahambi bakhetha ukubhukisha iiholide ngokuthe ngqo kunye nababoneleli phakathi kokungaqiniseki | Iindaba zase-UK
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba e-UK » Abahambi bakhetha ukubhukisha iiholide ngokuthe ngqo kunye nababoneleli phakathi kokungaqiniseki
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zokuQasha iMoto • Iindaba zokuhamba zaseYurophu • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Ukulinganiswa kweeholide • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Itekhnoloji yoKhenketho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-UK
Izitishi zokubhukisha ngokuthe ngqo kunokwenzeka ukuba ziye zafumana ukwanda kokuthandwa ngenxa yokuqaqamba kokubhukisha uhambo kwimeko yangoku.
Ukukhethwa kwabathengi kutshintshela ngqo kwiiholide zokubhukisha ngqo
I-39% yabaphenduli bophando bathe baya kubhukisha ngokuthe ngqo uhambo
I-17% yabaphenduli bophando bathe baya kukhetha ii-OTA kunye neendawo zokuthelekisa amaxabiso
Uvoto lweshishini lokuhamba kutshanje lubonakalise ukutshintsha kukhetho lwabathengi ngokubhekisele kwiiholide zokubhukisha ngqo, endaweni yokuya kwiarhente yokuhamba ekwi-Intanethi (i-OTA).
Bebonke i-39% yabaphenduli bathi baya kubhukisha ngokuthe ngqo, kulandele i-17% ekhethe ii-OTA kunye neendawo zokuthelekisa amaxabiso.
Abahlalutyi baqaphela ukuba olu tshintsho alothusi, ngenxa yokurhoxiswa okuguqukayo kunye nemigaqo-nkqubo yokubuyiselwa kwemali ethe ngqo enikezelwa ngokubhukisha ngqo.
Ubhubhane ubangele utshintsho olukhulu kwimikhwa yokubhuka yabathengi. Uvavanyo lwangaphambili kwi-Q3 2019 lubonise ukuba ii-OTA zezona zikhetho zibalulekileyo, zilandelwa ngokubhukisha ngokuthe ngqo kwihotele okanye kwinqwelomoya. Nangona kunjalo, ezinye ii-OTA ziye zacotha kakhulu ukukhupha imbuyiselo yemali kwaye zifumene isihlenga semithombo yeendaba ezimbi ngenxa yoko. Oku kuye kwankqonkqoza ukuzithemba kwabahambi ukuba babhukishe ngokusebenzisa abalamli.
Izitishi zokubhukisha ngokuthe ngqo kunokwenzeka ukuba ziye zafumana ukwanda kokuthandwa ngenxa yokuqaqamba kokubhukisha uhambo kwimeko yangoku. Abahambi ngoku banqwenela elona nqanaba liphezulu lokuba bhetyebhetye, kwaye ayimangalisi into yokuba indlela yokubhukisha ethe ngqo 'iimeko eziguqukayo, utshintsho olulula kunye nembuyekezo ekhawulezileyo abaphumeleleyo abahambi.
Ukuqhubela phambili, ukukwazi ukwenza utshintsho kwi-intanethi kubuyisela amandla ezandleni zabahambi kwaye kulungelelanise yonke inkqubo. Ngokubhukisha ngokuthe ngqo, umhambi usika umntu ophakathi, ngokukhawuleza akhawulezise inkqubo yokutshintsha / yokubuyiselwa kwemali, kwaye andise ukoneliseka.
Ezinye ii-OTA ziye zacotha ukukhupha imbuyekezo, kwaye amaphepha-ndaba agwenxa afunyenweyo khange akuncede ukuzithemba kwabahambi. Ngapha koko, kwezinye iimeko, UK Ukhuphiswano kunye noGunyaziso lweeMarike lusoyikise ngokuthatha amanyathelo asemthethweni ngaphandle kokuba iiarhente zokuhamba kwi-Intanethi zidibene nexesha elibuyiselweyo leentsuku ezili-14.
Ukuzithemba kubuchule be-OTAs bokukhupha imbuyiselo yemali kukhawuleze kwangoko ukuzithemba. Iimpendulo ezicothayo ziye zaphazamisa ngendlela emangalisayo kwaye zikhokelele kutshintsho oluncinci kule ndlela yokubhukisha.